Hargeysa:- Qiimo-kordhintii Roodhida Oo Hirgashay. |
Hargeysa:- Qiimo-kordhintii Roodhida Oo Hirgashay.
Hargeisa(GNN):-Maamuleyaasha iyo Mulkiileyaasha Warshadaha Roodhida soo-saaraa ee Magaalada Hargeysa, waxay dhawaan Raalli-gelin ka bixiyeen Qiimihii Roodhida oo ay kordhiyeen, ka dib markii xubno ka mid ah Dawladdu Xidh-xidhay.
Raalli-gelintooda ayaa ka dambaysay markii Shacabku aad uga cadhooday inay Qiimaha midhka Roodhida ah ka dhigeen 2500 shilin, halka Tukaamaduna markaa ku sii iibinayeen 3000 Shilin.
Roodhiileyaashu waxay Bulshada ka Raalli-geliyeen inay Qiimaha ay kordhiyeen, laakiin Raalli-gelintaasi waxay ahayd arrin ay Shacabka ku sireen, si ay iskaga jeediyaan oo loo iloobo.
In Roodhiileyaashu ay Shacabka Khiyaameen waxa u daliil ah, Qiimaha Midhka Roodhida ahi waxa uu Caawa Hargeysa ka marayaa 3000 Shilin, halka Tukaamada qaarkoodna intaa kaba sii qaaliyeyeen oo ay ku iibinayaan ama siinayaan 3500 Shilin.
Reer Hargeysa iyo guud ahaan Shacabka Somaliland, waxay caan ku yihiin in arrimaha dhibka ku ah ay maalmo kooban ka hadlaan, ka dibna iska iloobaan, taasi oo fursad u ah Ganacsatada kala duwan ee ma naxayaasha ah.
Soo jeedin:- Waxa Muhiim ah in Dawladdu ka daba tagto halka uu ku dambeeyay Qiimihii Roodhida ee Shacabku ka cadhooday kordhintiisa, isla-markaana si la hubo wax looga qabto.